Okubonwayo Ngokubabazekayo futhi Fairytale Intaba Altai ukukhumbula!
Altai Izintaba yeSiberia ngokuthi yitshe eliyigugu ngempela. Altai Izintaba ezikhangayo okuyinto okunzima kubala, is ngonyaka wavakashela yizivakashi ngaphezulu. Lapha, imvelo emangalisa, zibabaza futhi ujabulele ukuthi kungaba kakhulu ngendlela edingekayo - ke kuthulile ukuphulukiswa emachibini zeziyaluyalu emifuleni entabeni, izimpophoma kanye nokuncibilika kwezinguzunga zeqhwa, entabeni Amagquma sihamba.
Omunye ezikhangayo zemvelo eziyinhloko i-Mount Belukha - shrine we-Altai Izintaba eliphuma ngaphezu kogu lolwandle ngu 4.5 amakhilomitha. Umqansa ukuze isiqongo kwaso kungamane nje wazibonela uhamba, kodwa wonke umuntu angaya ngesikhathi kwentaba. Kunezinhlobo ezingaba ngu-170 izinguzunga zeqhwa, futhi isingathwe emifuleni eziningi ezisezintabeni.
Beluga abantu abaningi bendawo babebaleka cabanga engcwele entabeni. AmaBuddha bathi lapha uqala Shambala ezweni ongaqondakali, okuyinto eyayihlala onkulunkulu, lena indawo - ipharadesi okuzotholakala emva ukunyamalala abantu kusukela Earth. Gautama Buddha, njengoba legend uthi, wafika e-India kude lapha. Buddhism izimpande wafunda lapha ekuqaleni kwekhulu leminyaka eledlule, wabuye bamdumisa indawo umhlaba wonke.
Altai Izintaba ezikhangayo okuyinto ahlukile, izivakashi eziningi ngoba emihumeni yayo. Umuntu uye edonsela njalo zonke engaziwa, oyimfihlakalo futhi efihlwe ebumnyameni. Once in the "zamakhosi" komhlaba, umuntu ahlangabezane imizwa ehlukene: kokwesaba nokukhathazeka ilukuluku.
Budebuduze umthombo umfula Qamishli Environmental Umgede - the ejulile eSiberia. ukujula bayo 340 amamitha. Denisova Umgede idume okutholwe ngemivubukulo, okutholwe ukubaluleka alinganayo imibhoshongo baseGibhithe.
Ezinye emihumeni kukhona uxhaxha lwamangqamuzana emihumeni eziningana ezifana Tavdinsky (Taldinskie) emhumeni Karst imvelaphi. Abanye baye bathola iminonjana wakamuva ukuvakashelwa abantu, mhlawumbe oGwadule Old Amakholwa. Ekungeneleleni emihumeni ethandwa kakhulu anemisila izinyathelo ngokhuni, futhi amanye aze ngisho labetibambile ukukhanya. Uma eduze emihumeni kwaba emzaneni othiwa Tavda noma Talda, ke ayisekho kumephu, futhi igama kwesokunxele.
Ngokuphambene Tavdinsky emihumeni ngakolunye loMfula Katun kuyinto eziyinkimbinkimbi izivakashi igama elifanayo. Base Tavdinsky emhumeni nje ikhilomitha ukusuka crystal echibini ecacile yokufakelwa Turquoise Katun. Ngesisekelo izivakashi kanye amaholide babe ezindlini ezithokomele, kodwa ungakwazi wagxumeka itende e okhethiwe edlelweni eliluhlaza Awukude ogwini. Kukhona ebusika ukwakha "ezibiyele". Isakhiwo itholakala endaweni enhle lapho landscape yemvelo ngangokunokwenzeka igcinwa - azikho izindlela egandayiwe utshani manicured. Le ndawo Luhle imindeni nezingane ezincane, kanye nalabo abafuna uphumule "zasendle" imvelo, ngaphandle amacala futhi befuna komuzi, ngiphefumula umoya ohlanzekile entabeni.
Altai Izintaba ezikhangayo aziwa ngalé kwemingcele yayo idume iziphethu yayo amaminerali. amanzi Yemvelo uye ephulukisa izakhiwo kanye Ubuye palatability kakhulu. Futhi nakuba Sekuyisikhathi eside bendawo wasebenzisa umthombo amanzi okuphuza kanye nokukhucululwa kwendle, ukwakheka kwamakhemikhali yamanzi iziphethu eziningi angakafakwa wafunda.
Umthombo ethandwa kakhulu kuyinto Arjan-Suu, okusho entwasahlobo ongcwele. Itholakala okuphambene emhumeni ukuzilibazisa Tavdinsky. Amanzi umthombo Hydro-carbonate-calcium-magnesium nge wokuqukethwe lelisetulu ion esiliva, yingakho elinye igama - Isiliva Key. Umthombo Argens Suu itholakala ngakwesokudla Chu pheshana, ngakho-ke ubizwa nangokuthi umthombo somshayeli. Eceleni ikhefi ungumthombo "Arjan-Suu", elidume ngokuba nabantu ifilimu "Uhlala umfana", okuyinto ngo-1964 wabeka Vasily Shukshin ne kweqhaza abasha leonid Kuravleva, udlale indima yokushayela-umakhenikha.
Altai Izintaba ezikhangayo okuyinto ingabonakali ekuhambeleni olulodwa, has aura zikhanga kangaka iminyaka eminingi ngeke ezikhanga ukuba zingancishiswa wakhe. Kubonakala kanjalo abahambi kanye nezivakashi. Futhi njengoba abalobi, abaculi kanye ososayensi, okungenani kanye wavakashela Altai Izintaba, woza lapha ngokuphindaphindiwe!
Ingabe ngidinga i-passport Georgia? Amathiphu CIS abahambi
Four Seasons Resort Indawo abantu abajwayele "Krasnaya Polyana": Izibuyekezo
Ezokuvakasha Medical ezempilo
Indlela ukukhetha iholidi beach Bulgaria
Cooperative "Ichibi" kanye nabanikazi bayo
Kubathandi ukuphumula okuhle, Bulgaria
Indlela ukushintsha tariff "MTS": imiyalelo enemininingwane
Ihhotela Ilios Malia Apartments 3 * (Malia, Greece) izithombe kanye nokubuyekeza
Ubudala izici izingane iminyaka 4-5: Psychology
Polo shirts - imfashini njalo futhi stylish
Ulubizela ijazi ngaphandle imikhono?
Jasmine irayisi: inzuzo, ikhalori, ukubunjwa, zokupheka, ukubuyekezwa
Gel nail sula Bluesky Shellac: libuyekeza abathengi
Minerals weRiphabhulikhi Komi: sandstone, quartzite, aluminium nsimbi, imali amalahle eziveza, izinto itshe yemvelo
Kuhle ukugijima izicathulo (ukubuyekezwa)
Siyini "isimemezelo"? Incazelo ukusebenzisa izici inkulumo
Kuyini Ukudla Macrobiotic? ukudla Macrobiotic ngoba Lebedev: zokupheka